New Technologies Are Coming to Solve Bitcoin's Scalability - Blockchain Izindaba
Technologies okusha Ingabe Ngokuza Xazulula Scalability Bitcoin sika
AMP manje ijoyina inqwaba izikimu kanye nobuchwepheshe obusha ezithembisa ukubhekana nenkinga scalability Bitcoin sika. Ezinye izinketho zihlanganisa SegWit, Schnorr amasignisha, futhi Lightning Network.
Iziphakamiso eziyisisekelo AMP owawuyosebenza phezu Bitcoin Lightning Network. Umbani Inethiwekhi uhlelo endlalekile okuvumela ababambiqhaza ukuze lelisu iziteshi trustless micropayment ezokhipha, off-blockchain, eyodwa noma ukuthengiselana ukukhokhelwa multiple.
Lezi ziteshi lihlale ngaphandle Bitcoin blockchain. Ukuthengiselana zenzeke phakathi iziteshi. Lapho beqeda, la ukuthengiselana adluliswa, njengoba ukuthengiselana olulodwa, kuya blockchain.
Segwit kungenye kubalulekile Bitcoin esivimba ezingathuthukisa ikhono scalability Bitcoin futhi ukunciphisa kufakelwa Bitcoin sika. SegWit futhi azazise nakho kwamsiza ukuthuthukisa Lightning Network sika kuthengiselana malleability.
Njengoba ukusebenza SegWit sika ngo-August 2016, Onjiniyela ziye ngokuya zokuhlanganisa SegWit ku Bitcoin wallets, kanye Ukuhwebelana eziningana basebenzisa kakade SegWit. Okusanda, ngoFebhuwari 5th, 2018, Coinbase yamemezela ukuthi ukuhlolwa Esigabeni sokugcina usuqalile ukubusa nokuthi Segwit izotholakala kumakhasimende Coinbase emavikini ambalwa ezayo.
AMP enye kohlelo, kanye Lightning Network, uthembisa ukusiza ukuxazulula scalability udaba Bitcoin sika. Bitcoin abathanda kanye zimali ukulindela ukuthi AMP zizothola ukuxhaswa okuvela bonke abathintekayo mfihlo uzithathe ngempumelelo.
Ucabanga ukuthi Atomic Multi-Indlela Izinkokhelo phezu Lightning Network kuzoba nomthelela Bitcoin kufakelwa futhi ngesivinini? Sazise in the imibono ngezansi.
Cryptotrading - Zokungena kanye Phuma Amaphuzu
Kunini lapho engcono ...
Thumela Previous:Akubona bonke abavukuzi siyosinda bitcoin Izindleko nokwehlisa
Thumela Landelayo:Kanjani le ndaba yokuvinjelwa ukukhangisa mfihlo Facebook kuzosiza umkhakha
April 24, 2018 ngesikhathi 6:48 AM